အဖိုးက (၇၃)နှဈ၊ အဖိုးအမက (၈၅)နှဈ မောငျနှမ(၂)ယောကျ နတောတဲ့…မမကွီးက နမေကောငျးဘူးတဲ့ – Shwe Thadin
အလ်လာဟျ မမကွီးတှကျ…ဆေးတှေ ပို့လိုကျပွီ…တာမှေ အခှနျလှတျစြေး…ကားလေး လုပျနတေုနျး သားလေး…သားလေး…မွပေဲလေး အားပေးပါလား…တထုပျမှ (၁၀၀)ပါ သားရယျ…ကနြျောလဲ မကွားတကွား…အမှုမဲ့ အမှတျမဲ့…အဖိုးက ထပျရောငျးသံလေး ကွားတော့…ကွညျ့လိုကျမိတယျ။ အဖိုးက ပွုံးပွတယျ…
ပွီးတော့ ခေါငျးလေး ငုံ့ပွီး ပွနျလှညျ့ သှားတယျ (ကနြျောလဲ မဝယျဘူးပေါ့ဆိုပွီ) အဖိုး…အဖိုး လာပါအုံး…ထိုငျအုံး…ဘာတှေ တုနျး?? (အဖိုးပြျောသှားတယျ) သားလေး မွပေဲထုပျ…အခဉျြပေါငျ…နကွောစလေ့ေးတှေ ပါ။ ဘယျလိုရောငျးလဲ အဖိုး?? မွပေဲလေးတှကေ တထုပျ ၁၀၀ကပျြပါ။ အခဉျြပေါငျ၊ နကွောစကေ့ တထုပျ ၁၅၀ကပျြပါ သားလေး…အဖိုး…နကေလဲပူတယျ…အိမျပွနျခငျြလား??
ပွနျနားခငျြတာပေါ့…မမကွီးက နမေကောငျးတော့ ဆေးလေး ဝယျဖို့…ရောငျးရအုံးမယျ။ ကဲ…နပေူတယျ အဖိုး…အားလုံး ဘယျလောကျကလြဲ ?? ဟာ…သားတကယ်လား ?? တကယျ ပေါ့…လာတူတူ တှကျကွညျ့မယျ။ မွပေဲပဲကွီးလှျော (၂၉)ထုပျ – 2,900 Ks အခဉျြပေါငျ၊ နကွောစေ့ (၆၁)ထုပျ – 6,100 Ks,Total – 9,000 Ks ကတြယျ။ အဖိုးရေ…ရော့ 30,000 Ks သား…ပိုကျဆံတှကေ မြားနတေယျ။
အဖိုးမှာ ပွနျအမျးဖို့ အကွှလေေးတှကေလဲ မပွညျ့ဘူး (၁၀၀တနျ; ၅၀တနျလေးတှေ) ရတယျ။ အဖိုး အမျးစရာမရှိရငျ…အမျးနဲ့တော့…ဟာ…ဝမျးသာလိုကျတာ….အလ်လာဟျကယျလိုကျပွီ။ မမကွီးတှကျ…အားဆေးလေးဝယျပွီး ပွနျမယျ။အဖိုးက (၇၃)နှဈ၊ အဖိုးအမက (၈၅)နှဈ မောငျနှမ(၂)ယောကျ နတောတဲ့…မမကွီးက နမေကောငျးဘူးတဲ့… အဖိုးက ရှာကြှေး နတောပါ။ ဟုတျ အဖိုး…ပွနျတော့နျော…
ဂရုစိုကျပွီ ပွနျနျော…အော…ကနြျောတို့ ထမငျးဆိုငျကွီးတှမှော စားရငျ ကုနျကစြရိတျတောငျ မရှိတဲ့ ပိုကျဆံလေးက…အဖိုးတှကျ ခွတေိုအောငျ ရောငျးတာတောငျ မရနိုငျတဲ့ အရာပါလား ဆငျးရဲနှမျးပါး အဖိုး အဖှားမြားအတှကျ အတူအကှ ပူးပေါငျး ကူညီလှူဒါနျးလိုပါက ကိုပူတူးနှငျ့ဘျောဒါ မြား ဖုနျး 09-5408437 သို့ဆကျသှယျလှူဒါနျးနိုငျ ပါတယျရှငျ…
အလ္လာဟ် မမကြီးတွက်…ဆေးတွေ ပို့လိုက်ပြီ…တာမွေ အခွန်လွှတ်ဈေး…ကားလေး လုပ်နေတုန်း သားလေး…သားလေး…မြေပဲလေး အားပေးပါလား…တထုပ်မှ (၁၀၀)ပါ သားရယ်…ကျနော်လဲ မကြားတကြား…အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့…အဖိုးက ထပ်ရောင်းသံလေး ကြားတော့…ကြည့်လိုက်မိတယ်။ အဖိုးက ပြုံးပြတယ်…
ပြီးတော့ ခေါင်းလေး ငုံ့ပြီး ပြန်လှည့် သွားတယ် (ကျနော်လဲ မဝယ်ဘူးပေါ့ဆိုပြီ) အဖိုး…အဖိုး လာပါအုံး…ထိုင်အုံး…ဘာတွေ တုန်း?? (အဖိုးပျော်သွားတယ်…)သားလေး မြေပဲထုပ်…အချဉ်ပေါင်…နေကြာစေ့လေးတွေ ပါ။ဘယ်လိုရောင်းလဲ အဖိုး?? မြေပဲလေးတွေက တထုပ် ၁၀၀ကျပ်ပါ။ အချဉ်ပေါင်၊ နေကြာစေ့က တထုပ် ၁၅၀ကျပ်ပါ သားလေး…အဖိုး…နေကလဲပူတယ်…အိမ်ပြန်ချင်လား??
ပြန်နားချင်တာပေါ့…မမကြီးက နေမကောင်းတော့ ဆေးလေး ဝယ်ဖို့…ရောင်းရအုံးမယ်။ ကဲ…နေပူတယ် အဖိုး…အားလုံး ဘယ်လောက်ကျလဲ ?? ဟာ…သားတကယ္လား ?? တကယ် ပေါ့…လာတူတူ တွက်ကြည့်မယ်။ မြေပဲ;ပဲကြီးလှော် (၂၉)ထုပ် – 2,900 Ks အချဉ်ပေါင်၊ နေကြာစေ့ (၆၁)ထုပ် – 6,100 Ks,Total – 9,000 Ks ကျတယ်။ အဖိုးရေ…ရော့ 30,000 Ks သား…ပိုက်ဆံတွေက များနေတယ်။
အဖိုးမှာ ပြန်အမ်းဖို့ အကြွေလေးတွေကလဲ မပြည့်ဘူး (၁၀၀တန်; ၅၀တန်လေးတွေ) ရတယ်။ အဖိုး အမ်းစရာမရှိရင်…အမ်းနဲ့တော့…ဟာ…ဝမ်းသာလိုက်တာ….အလ္လာဟ်ကယ်လိုက်ပြီ။ မမကြီးတွက်…အားဆေးလေးဝယ်ပြီ ပြန်မယ်။အဖိုးက (၇၃)နှစ်၊ အဖိုးအမက (၈၅)နှစ် မောင်နှမ(၂)ယောက် နေတာတဲ့…မမကြီးက နေမကောင်းဘူးတဲ့… အဖိုးက ရှာကျွေး နေတာပါ။ ဟုတ် အဖိုး…ပြန်တော့နော်…
ဂရုစိုက်ပြီ ပြန်နော်…အော…ကျနော်တို့ ထမင်းဆိုင်ကြီးတွေမှာ စားရင် ကုန်ကျစရိတ်တောင် မရှိတဲ့ ပိုက်ဆံလေးက…အဖိုးတွက် ခြေတိုအောင် ရောင်းတာတောင် မရနိုင်တဲ့ အရာပါလား ဆင်းရဲနွမ်းပါး အဖိုး အဖွားများအတွက် အတူအကွ ပူးပေါင်း ကူညီလှူဒါန်းလိုပါက ကိုပူတူးနှင့်ဘော်ဒါ များ ဖုန်း 09-5408437 သို့ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင် ပါတယ်ရှင်…
ရနှေေးပူကလောငျ ယောင်ျကြားကပဈသှား ကလေး(၂)ယောကျနှငျ့ ဒုက်ခရောကျနတေဲ့ အမ